Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho - [Ukubonisana kwamazwe ngamazwe]
> Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho
2019-04-21 2019-04-23 Ukubonisana kwamazwe ngamazwe Fashion
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : Uhlobo lomzimba oluthatha ukuhamba nge-swimsuit yi-MiMorena BeachWear
Indlela yokukhetha ukugibela
Ingabe kufanele uthole insimu yokugqoka isayizi encane
Ukukhetha ukuphakama okuphezulu kokushaywa kwe-swimsuit
Indlela yokukhohlisa ama-boobs ami ku-swimsuit
Ungakhetha kanjani ukugibela umuthi womzimba wakho
Ungayinakekela kanjani i-swimsuit bese uyigcina isikhathi eside
Isikhathi sokubhukuda futhi sihlale sikhumbula ukuthi lo mbono ungathumela abesifazane abambalwa bememeza futhi baqhubekele emithambekeni kukhona ukwethenjwa ekutholeni i-suti yokugeza yokuhleleka ukukhombisa izinzuzo zakho.
Ngenkathi i-suit efanele yokugeza iyisisekelo esibalulekile ekamelweni lakho, khumbula ukuthi ama-suits okugeza ayilinganiswa njengezingubo ngokuvamile. Ngempela, kufanele uzame ukuphakama komuntu oyedwa kuya kokubili kunokulinganisa kwakho okujwayelekile.
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : Ukukhetha isitifiketi
Kungakhathaliseki ukuthi unqikazi ukukhuphuka usayizi, ungahlanganyeli nenombolo. Ukufaneleka okulungile yilokho okubalulekile. Uma uthola i-suit oyithandayo, phakamisa izandla zakho, uphendukeze, uhlale phansi, uhambe ujikeleze ukuqinisekisa ukuthi ngeke uhlangane
Njengoba kunezinhlobo eziningi zezitayela zokugeza ezitholakalayo, kubalulekile ukugcina lokho okusebenza emzimbeni wakho nokuthi yini engekho. Ngokwesibonelo, uma ufuna i-tankini, qinisekisa ukuthi ingxenye yesisu yale suti ilele izinga ngokumelene nesisu sakho kodwa asikho
Ngaphezu kwalokho, ngenkathi ukhetha imiklamo, khumbula ukuthi imivimbo eqondile iyanconywa kakhulu kunemivimbo yezinga. Iqiniso litshelwe, izibonelo ezinemibala elinezindinganiso ezilinganiselwe zibukeka kahle kakhulu.
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : Ukukhethwa kobukhulu bokuhamba nge-Swimsuit yi-MiMorena BeachWear
Indlela yokuthola ukushaywa kwe-swimsuit ukuphikisana ne-butt yami
Ngesikhathi uzama ukuhlanza i-suit suit, qinisekisa ukuthi isikhumba sakho asikhiphi kusuka kumaphakathi noma esifundeni somlenze. Ngethuba lokuthi lenzani, futhi futhi, hamba lapho ukhuphuka usayizi. Uma kwenzeka ukuthi inkinga isesekhona, cabangela enye isitayela esezansi
Gcina engqondweni, amabhodlela athululeka uma emanzi. Qinisekisa ukuthi i-base ifanelana kahle ngokwanele lapho ingayibuki khona i-saggy uma imanzi. Ama-shorts ezincane azifihli izintambo, ama-bums amaningi, noma amathanga aphansi - njengomthetho jikelele abanezela nje izindawo zakho zokukhathazeka.
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : I-swimsuit yokubamba izintambo ezithinta u-MiMorena BeachWear
Uma kwenzeka ucinga phezulu nge-underwire, kufanele ifanelane ne-bra yakho efanelekayo. I-underwire kufanele ilale izinga ngokumelene nesikhumba sakho ngaphandle kwesifuba sokuphumula.
Kwabesifazane abaningi, uhlangothi lwe-cleavage luyinkinga. Kusukela engaphansi kwakho, ¾ esifubeni kufanele uvikeleke. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yamabhasi amakhulu, i-strap top noma i-underwire phezulu inikeza usizo olungcono nokufakwa. Isiphetho sesibhande nge-band eningi esinikezayo
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : I-flattering swingsuit phezulu nge-MiMorena BeachWear
Ngokuphathelene nokugeza, ama-cleavage akuzona zonke izinto ezibalulekile. Iningi labesifazane bathanda ukucindezela ukuhamba kwabo, kepha ukuphendula ngokweqile akuyona impendulo efanele. Gwema ama-cushions amakhulu, ashukumisayo. I-froth igcina amanzi njengokusula futhi ngokujwayelekile iyophoqa
Ngaphandle kweso ukuthi udinga ukwengeza ukuxuba okunye ngaphezulu, khetha umkhumbi omncane obukeka ovamile. Amaphikishi amaningi angasulwa ukuze afanele noma yisiphi isitayela esiphakeme. Ukuze ugcine umcibisholo ungashenxisanga, faka ama-cushions ekugubungeni phezulu noma s
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : Ama-boobs ahlambalaza nge-swimsuit yi-MiMorena BeachWear
Iningi laleli seluleko sokuhlanza lingase lidumise lapho uxosha isambatho sokugeza kodwa khumbula nje izeluleko zesitayela ezihambisanayo lapho uthengisa futhi uzama amasaka:
- I-Torsos emifushane: Imivimbo eqondile noma ama-prints azokwenza umzimba wakho ubuke isikhathi eside.
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : I-swimsuit ehamba ngezintambo yi-MiMorena Beachwear
- I-Torsos ende: izindawo eziphakeme kanye nezindawo eziphansi zentanyane ubude bomzimba obufushane. Gwema imivimbo eqondile.
- Fihla i-Tummy yakho: Izitayela ezibeka amehlo emabala ahlukene zilungile. Zama phezulu ophrintiwe ngenhla eqinile. ngaphezu kwalokho, Zama ucezu olulodwa oluqhekezayo phakathi noma oluzosivula amehlo ekubhekeni kwe-bust line. Tankinis Futhi sebenzisa extraordi
- Isidumbu esenziwe ngomzimba: bheka Izitayela ezenza isisu. Dodge izitshalo ezicacile.
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : Uhlobo lomzimba olulinganayo lokugijima nge-MiMorena BeachWear
- i-Chest encane: izimpendulo ze-Bold nama-Bold hues ukuncoma njalo. I-Bandeau ingcono nje ukubeka ukugxila emathunjini amancane.
- Isifuba esikhulu: Ukusekela kufanele kube ukukhathazeka okuyinhloko. I-underwire phezulu izosiza kakhulu. izikhwama zomkhonto, ikakhulukazi ezinamaqembu amaningi, Futhi unikeza usizo olukhulu. Gwema imiklamo egcizelela isikhukhula. Zama isisekelo esinamandla nesisekelo esinyathelisiwe.
- Ama-Hips amakhulu noma ama-Saddle Bags: faka ukucabangela mayelana nesigamu sakho esiphezulu. Khetha Izitayela ngezingqimba ezilinganayo, ama-hues amancane amancane, noma ngezimbumbulu. Zama ukuqina okuqinile okuphezulu okuphrintiwe.
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : I-swimsuit ifaka uhlobo lomzimba yi-MiMorena BeachWear
Lapho uthola i-suit efanele yokugeza, udinga ukuthatha ukucatshangelwa okungeziwe kokunye. Phishekela lawa macebiso ukuze ugcine i-suit yakho yokugeza elungiselelwe unyaka wonke:
- Hlanza njalo imoto yakho yokugeza kanye namanzi omuntu wesibhamu ngemuva kokubhukuda. Kufanele ugeze izandla zakho nge-cleanser mellow fluid. Abanye abahlanza "izandla zokuhlanza izandla" bangenza ama-hues avule. Abahlanza ngobumnene, isibonelo, i-Ivory®, basebenze kangcono. Hlala u-awa
- Indlela enhle kunazo zonke yokomisa i-suit yakho ukuyibeka ezingeni eliphezulu emoyeni. Ungalokothi ubeke i-suit yokugeza emisekeni noma u-wring it out !!! Yeka ukufaka i-suit yokugeza yakho kuze kube yilapho isomile ngokuphelele. Ngaphandle kwengozi ukuthi ilahlwe ngenkathi
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : I-swimsuit ebiza kakhulu yi-MiMorena BeachWear inakekelwa
- ngenkathi usebenzisa ama-sun tan creams asekelwe ngamafutha, Misela ukuxhumana okuqondile ne-suit yakho yokugeza. amafutha ngokuvamile avusa ukuhlanza ama-elastic ehlathini.
- Amathoyizi atshisayo namanzi adume ngamakhadizi angenza ukuhlunga kwakho kufakwe ukuhlunga. Ngokufanayo, Lezi zimo zamanzi zingenza ukugqwazisa kuphazamise noma kuphephe. Khulisa isethulo sakho sokuhlanza ku-Hot noma ngokudlulela kwamanzi okuchithwa noma ukugqoka
Amathiphu okuzulazula ukuthola inhlanzi ehamba phambili ephikisana nomzimba wakho : I-swimsuit ephethwe ngokuhle yi-MiMorena BeachWear
Ishicilelwe ekuqaleni - www.maleraffine.com
amathiphu wokugibela, ukuguqulwa, zokugeza, isithuthuthu, ama-beachwear, phumani umdanso futhi ugeze, izitayela ze-swimsuit,
Igama* I-imeyili* Iwebhusayithi Amazwana*